खेलकुद – समाचार खबर
Demo Sites > समाचार खबर > खेलकुद
क्रिकेटमा नयाँ नियम बल चम्काउन नपाउने !!
असार २४, २०७७ खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले क्रिकेटमा खेलका दौरान थुकले बल चम्काउन नपाइने लगायतका नियमहरु परिवर्तन गरेको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसको महामारीलाई मध्ये नजर गर्दै आईसीसीले मंगलबार थुकले बल चम्काउन नपाइनेसहितका नियम परिवर्तन गरेको हो । आईसीसीको प्रमुख…
हार्यो युभेन्ट्स, ७ अंकको अग्रता कायम
अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा रहेको साविक विजेता युभेन्टस मंगलबारको खेलमा एसी मिलानको घरेलु मैदान सान सिरोमा ४-२ ले पराजित भयो । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा भने ६ गोल भएको थियो । युभेन्टसले दोस्रो…
१०० औ विकेट पुरा गर्दै सन्दिप, कुन लिगमा कति !! हेर्नुहोस पूर्ण विवरण
असार १५, २०७७ खेलकुद
सन्दीप लामिछानेले टी-२० क्रिकेटमा १०० विकेट पूरा गरेका छन् । यस्तो गर्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् । थाईल्याण्डमा भईरहेको एसीसी टी-२० ईस्टर्न रिजन अन्तर्गत मलेसियाविरुद्ध पहिलो विकेट लिँदै सन्दीपले १०० विकेट पूरा गरे । त्यसका लागि उनले राष्ट्रिय…
गोल रहित मर्सिसाइड डर्बी
असार ८, २०७७ खेलकुद
प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको लिभरपुल एभरटनसँग बराबरीमा रोकिएको छ । २३६ औँ मर्सिसाइड डर्बीमा एभरटनले लिभरपुललाई घरेलु मैदानमा गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो । एभरटनको घरेलु मैदान गुडिसन पार्कमा भएको पछिल्लो ८ मर्सिसाइड डर्बीमा यो सातौं बराबरी हो । कोरोना…